साउथ फिल्मकी चर्चित अभिनेत्री काजल अग्रवालको आज जन्मदिन, कति वर्ष लागिन त ? हेर्नुहोस – Butwal Sandesh
साउथ फिल्मकी चर्चित अभिनेत्री काजल अग्रवालको आज जन्मदिन, कति वर्ष लागिन त ? हेर्नुहोस
काठमाडौं – साउथ फिल्मकी चर्चित अभिनेत्री काजल अग्रवालको आज जन्मदिन परेको छ । सन् १९८५ जुन १९ मा मुम्बईमा जन्मिएकी अभिनेत्री अग्रवाल आजबाट ३४ बर्षमा लागेकी छिन् । उनले आज आफ्नो जन्मदिन घरमै परिवारसँग मनाउदैछिन् ।
उनले बलिउडमा सिंघम फिल्मबाट डेब्यु गरेकी थिइन् । बलिउड फिल्मबाट त्यति चर्चामा आउन नसकेकी काजल साउथ फिल्मबाट चर्चामा आइन् । उनले फिल्मी यात्रा सुरु गर्नुअघि विज्ञापनमा काम गर्ने गर्थिन् । उनको करिअरकै सबैभन्दा हिट फिल्म मगधिरालाई मानिन्छ ।उनले हालसम्म ४० बढी फिल्ममा अभिनय गरिसकेकी छिन् ।
पूर्वयुवराज्ञी हिमानी शाह आफ्नो दुई छोरी पुर्णिका र कृतिकासँग सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा रमाइरहेको भिडियो अहिले भा*इरल भइरहेको छ । छोरी पुर्णिका र कृतिका शाहको टिकटक एकाउन्टमा राखिएको भिडियो धेरै भए पछी पूर्व युवराज पारस शाहले पनि सामाजिक संजालमा लब साइन सहित उक्त टिकटक भिडियो आफ्नो प्रोफाइलमा राखेका छन ।
सम्बन्ध बि*ग्रियो भन्नेहरूको लागि आफ्नो परिवारलाई उत्ति कै माया गर्छन भन्ने यो एउटा प्रमाण देखाइदिएका छन् । पारसले पत्नी हिमानी र छोरीहरु पुर्णिका र कृतिकाको टिकटक भिडियो शेयर गर्दै लेखेका छन् – ‘फ्यामिली’ र चेम्बर अफ माई ग्रेट’ ।
सोमवारमात्र एउटा टिकटक भिडियो भा*इरल भएको पूर्व युवराज्ञी हिमानी शाहको छोरीहरुसंग रमाइलो गरेको अर्को टिकटक भिडियो पनि सार्वजनिक भएको छ । सोमवार अपलोड भएको भिडियो एकै छिनमा भा*इरल भएको थियो । मंगलवार विहानै देखि फेरी अर्को टिकटकको भिडियो सार्वजनिक भएसंगै भा*इरल भएको छ । सोमवार सार्वजनिक भएको सोही भिडियो पूर्वयुवराजले पारसले शेयर गरेका हुन् ।